ဒီတလောမှာ အင်တာနက်က ကျော်ရခွရခက်နေတာရယ် အလုပ်များနေတာရယ်၊ MCPA ကအလုပ်တွေရယ် ၀ယ်ထားတဲ့အိမ်ခန်းလေးကို ပြင်နေတာရယ်နဲ့ ဘလော့ကိုတောင် လှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အခုလဲ ၅၂ လမ်းအိမ်ခန်းအတွက် ဘက်ထရီအိ်ုးဝယ်လာပြီး လာထားရင်း အနီးနားက အင်တာနက်ဆိုင်လေးကနေ ၀င်ဖြစ်လို့။
အိမ်ပြင်နေတာ တစ်လနီးပါးရှိပြီ။ ငွေလဲ ငါးဆယ်ကျော်လောက်ချောသွားပြီ။ အခုတော့ ရုပ်လုံးလေးနည်းနည်းထွက်လာပြီပေါ့။ အခန်းနှစ်ခန်းဖွဲ့ပြီးပြီ။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုခန်းတွေ ပြင်ပြီး ကြွေပြားကပ်ပြီပြီ။ မီးကြိုးတွေရိုက်ပြီးပြီ။ ဒီနေ့တော့ ရှာထိုးကြမ်းခင်းတွေကို ချောနေကြလေရဲ့။ အိပ်ခန်းနှစ်ခုအတွက် အလူမီနီယံ ပြူတင်းပေါက်တွေ တံခါးတွေလုပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်။
အိမ်ခန်းစပြင်မယ်ဆိုကတည်းက ကျွန်တော်ရော မိန်းမရောကို မအားတာ။ ကိုယ်တိုင် တိုင်းထွာပြီး Microsoft Visio လေးနဲ့ အခန်းတွေဖွဲ့ကြည့်တယ်။ လုပ်ပေးတဲ့ လက်သမားဆရာကြီးက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမောင်တင်အောင်လေးဆီကပဲ။ iNTEGRA ရုံးခန်းက ကိစ္စတွေဆိုလဲသူ့ကိုပဲခိုင်းနေကျပေါ့။ တကယ်တန်းပြင်ကြတော့ တစ်ယောက်လောက်စောင့်ပြီး ကြည့်နေနိုင်ပြောနေနိုင်မှရယ်။ မဟုတ်ရင် တလွဲတချော်တွေဖြစ်ကုန်ရော။ Program ရေးတာမှားလို့ ဖျက်ရပြင်ရရင် မသိသာပေမဲ့ အခုဟာက ထင်းထင်းကြီးကို ဖြစ်နေရော။ မီးကြိုးပြေးရမဲ့နေရာတွေ၊ မီးဖိုအုတ်ခုံ၊ ရေကန်.... အိုး စုံနေတာပဲ။ ဒါတောင် မိန်းမက အစောပိုင်းမှာ နှစ်ပတ်လောက် ခွင့်ယူပြီး ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်နေလို့ တော်တော့တယ်။ ဒါတောင် သူခိုးဝင်ဖောက်သွားလို့ ဆေးပုံးတွေ နှစ်သိန်းဖိုးလောက်ပါသွားတယ်။ ထီပေါက်သွားတာပေါ့ :D
နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ လက်စသတ်ပါပြီ။ ဆိုတော့ နောက်လအလယ်လောက်မှာ ဒီအိမ်ခန်းကို ပြောင်းဖြစ်မယ်။ အဲဒီကြမှပဲ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို အိမ်တက်ဖိတ်ကျွေးတော့မယ်။ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ လမ်း၅၀ထိပ်မှာ ပလက်ဖောင်းပေါ်ထိုင်သောက်လို့ရတဲ့ ဘီယာဆိုင်လေးရှိတယ်။ ဈေးသက်သာတယ် ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ အရင် ၅၁လမ်းမှာနေတုန်းကထိုင်နေကျပေါ့။ ဒီအခန်းသစ်ကို ပြောင်းလာပြီးရင် ဒီဆိုင်လေးမှာ ပြန်ထိုင်လို့ရပြီပေါ့။ :)
Posted by little moon at 3:49 PM5comments:
ခပ်ပေါ့ပေါ့မမှတ်နဲ့။ ကျုပ်က ဘီလီယံနာဗျ။ 50 Billion Dollar တောင်မှ။ ဒါတောင် တစ်ရွက်ထဲ ထုတ်ပြသေးတာနှော :P ။ ကျုပ်ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ အခုကို ရှိနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ငါးထောင်တန်က ဒီ ဇင်ဘာဘွေပိုက်ဆံနဲ့စာလိုက်ရင် သုည ခုနစ်လုံးတောင် နည်းသေးတာပဲ။ :D
ဒါပေမဲ့ ဇင်ဘာဘွေမှာ ကြက်ဥသုံးလုံးကို 100 Billion Dollar တဲ့။ ဖြစ်ရလေ ... ကျုပ်ရဲ့ 50 Billion Note က ဒါဆိုရင် ငုံးဥတစ်လုံးလောက်ပဲရမှာပေါ့ ... lol
Posted by little moon at 12:01 PM4comments:
ManU2- 1 Arsenal
ပထမပိုင်းမပြီးခင်လေးမှာ Arshavinရဲ့ ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ အာဆင်နယ် အတွက် အားရတဲ့ စိတ်လေးတွေတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။ Almunia ရဲ့ Rooneyကို ဖမ်းဆွဲသလိုဖြစ်သွားလို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပင်နယ်တီက .... အော် အနည်းဆုံးသရေပေါ့လေ။
တစ်ဂိုး လောက်တော့ ထပ်သွင်းမှာပါ... ဖြေသိမ့်တွေးလို့မှမဆုံးသေး Diaby က အားရပါးရ ကိုယ့်ဂိုးပေါက်ထဲကို တန်းနေအောင် တိုက်သွင်း လိုက်ပါလေရော။ ကောင်းလေစွ။ သူများဂိုးပေါက်ကို သွင်းဖို့ ကြိုးစားရင် အတော့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ သွင်းရပြီး မတော်တဆ အဖြစ်ကလည်း တိုက်ဆိုင်လှချေလား။ တမင်ချိန်ပြီးတိုက်သွင်းရင်တောင် ၀င်ဖို့ အတော်ခက်တဲ့နေရာ။
ဒီပွဲကတော့ အသင်းကြီးနှစ်သင်းကန်တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ဘုရားစူးပါပဲ။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ Van Persie ရဲ့တိုင်ထိသွားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောရယ် နောက်ဆုံးမိနစ် Gallas လူကျွံဘောဖြစ်သွားတဲ့ ဂိုးရယ် ... မရလိုက်တာက အာဆင်နယ် ကံဆိုးတယ်ပြောရမလား မန်ယူ ကံကောင်းတယ် ပြောရမလားမသိ။ အနော် မောင်ထွန်းခိုင်ကတော့ လောင်းထားတာရှုံးလို့ ဘကြီးဇော်မိုးနဲ့ ကိုရဲတို့ကို GlenFiddich Single Malt 12 Years ၀ယ်တိုက်ရပါတော့မည် :(
Posted by little moon at 12:41 PM 1 comment:
အဖိုးနဲ့အဖေ …. ကျွန်တော်နဲ့သားသား
အဖိုးဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် မှတ်ဥာဏ်အာရုံထဲမှာ ၀ိုးတိုးဝါးတားရယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက လှည်းတန်း ပန်းခြံလမ်း ကောင်စီရုံးဘေးကအိမ်မှာနေစဉ်က အဖိုးအဖွားတို့က အောက်ထပ်မှာ နေပြီး ကျွန်တော်တို့က အပေါ်ထပ်မှာနေတာကိုတော့ သတိရတယ်။ အဖိုး (အဖေရဲ့အဖေ)က အငြိမ်းစား မူလတန်းပြကျောင်းဆရာ။ အဲဒီတော့ သူ့မြေးဦး ကျွန်တော့်ကို ကကြီးခခွေး အ အထိရေးတတ်အောင် သင်ပေးသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက သူသိပ်မကျန်းမာတော့။ လည်ချောင်း ကင်ဆာကြောင့် ဆေးရုံမတက်ရခင်အထိ ကျွန်တော့်ကို စာတွေသင်သွားကြောင်း အဖေက ပြန်ပြောပြဖူးတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဖိုးစာသင်ပေးတာကို ၀ိုးတ၀ါး မှတ်မိနေတယ်။ အဖိုးဆုံးတော့ အဖေ့တပ်ကရဲဘော်တွေ အိမ်ရှေ့မှာ မိုးကာစနဲ့ တဲကြီးလိုလာထိုးကြတာ၊ အိမ်ကို လူတွေအများကြီးလာကြတာ၊ ကားစီးပြီးသွားကြတော့ ပန်းတွေကြားမှာ စန့်စန့်ကြီးအိပ်နေတဲ့ အဖိုးကို ၀ိုင်းအုံကြည့်နေကြတာ… တစ်ပိုင်းတစ်စ ရေးတေးတေးတွေလောက်ပဲ မှတ်မိတော့သည်။ အဖိုးနဲ့ ဒီထက်ရင်းရင်းနှီးနှီး အချိန်ကြာကြာနေဖို့ အကြောင်းမဖန်ခဲ့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော့်ကလေးဘ၀အကြောင်းတွေ ပြန်စဉ်းစားမိရင် အဖေအကြောင်းတွေ အများကြီးပါတယ်။ မနေ့ညနေက သားသား မောင်ထွန်းလင်းထွန်း အပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီး တံခါးကို လက်ညှိုးထိုးနေတာနဲ့ အောင်ဆန်းကွင်းနားက City Mart ကို လိုက်ပို့ရင်း ဟိုးအရင်တုန်းတွေက ညဖက်တွေဆို အဖေက လှည်းတန်းထိပ်က ဆိုင်တန်းလေးတွေဆီကို လမ်းလျှောက်ပို့ပေးရင်း ရေခဲမုန့်ကျွေးတာတွေ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရေခဲမုန့်က တစ်ခု တစ်မတ်ပဲရှိသေးတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုရင်လဲ လှည်းတန်းဘူတာကနေ သံလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီး ဆင်မလိုက်သဘောင်္ကျင်းနားက ကန်စွန်းခင်းတွေနား ကစားဖို့ လိုက်ပို့ပေးတတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ရွံ့တွေဗွက်တွေနဲ့ ပေတူးနေအောင် ဆော့ပြီးမှ အိမ်ပြန်ကြတာ။
အခုမှ ပြန်တွေးကြည့်ရင် အဖေ့ရဲ့ training တွေက အတော်ကောင်းခဲ့တာ ပြန်တွေ့ရတယ်။ ကလေးကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ဆိုတာမျိုးကို တော်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းက မသိမသာ သင်ပေးထားတာ။ ၂တန်း မတက်ရခင်နွေရာသီမှာလည်း အမေ့မောင်ဝမ်းကွဲက ကချင်ပြည်နယ် ကာမိုင်းမှာ မင်္ဂလာသွားဆောင်ဖို့ရှိတာကို ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်တည်း သူတို့နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ငယ်တော့ သိပ်မမှတ်မိပေမဲ့ မန္တလေး မြစ်ကြီးနား မိုးကောင်း ကာမိုင်း တို့ ရောက်ဖူးခဲ့တယ်။ ၂တန်းကျောင်းသားတုန်းက စိန့်ဖလိုးဘေးနားက မူလတန်းကျောင်းလေးမှာနေရတာ။ တစ်ရက်မှာ အပြန်ကျောင်းကားရောက်မလာတာနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေကစောင့်နေကြပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာ မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်လောက်ကနေ လမ်းတန်းကုန်းဆင်းအထိ လမ်းလျှောက်ပြန်သွားတယ်။ ကလေးပျောက်လို့ ဆိုပြီး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကုန်ရော.. :D
အဲဒီအချိန်လောက်မှာပဲ အမေက လွိုင်ကော်ပြောင်းရတယ်။ ညီမတွေနဲ့ အရင်သွားနှင့်တော့ ရန်ကုန်အိမ်မှာ အဖေနဲ့ ကျွန်တော်ပဲကျန်တယ်။ ကျောင်းသွားရင် အဖေက အိမ်သော့လေးကိ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲချိတ်လေးနဲ့ ထည့်ပေးထားတယ်။ ကျောင်းကပြန်ရောက်လို့ သော့ခတ်ထားရင် ကိုယ်ဘာသာဖွင့်ဝင်ပေါ့။ ညဖက် duty ကြရင်လည်း ကျွန်တော့်ဘာသာအိပ်ပေါ့။ ထမင်းစားဖို့က စားပွဲပေါ်မှာကြည့် ဟင်းမရှိရင် ပိုက်ဆံ ဆယ်တန်လေး ထားပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ လှည်းတန်းထိပ်နားက ရွှေမြိုင်ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာ စတုမတူ ပုလင်းလွတ်လေးနဲ့ သွားထွက်ဝယ်ပေါ့။ အခုခေတ်လို တီဗွီလဲမရှိသေးပါဘူး။ စားသောက်ပြီးရင် ကျွန်တော့်ရဲ့အပန်းဖြေကစားနည်းက အိမ်ကြမ်းပြင်တွေ ပြည်အောင် မြေဖြူနဲ့ လေယာဉ်ပုံတွေဆွဲတာပဲ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် အဖေက သူ့ရုံးကို ခေါ်သွားတတ်တယ်။ (မင်္ဂလာဒုံ ၅၀၂) အဖေက လက်နက်အရာရှိဆိုတော့ ရုံးလိုက်သွားရင် သေနတ်စင်တွေကြား ကစားရတာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ လေယာဉ်ရုံကို လိုက်ပို့တယ်။ လေယာဉ်တွေပေါ် တစ်စီးပြီး တစ်စီးတက်ကြည့် ဆော့ပေါ့။ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ နေ့လည်နေ့ခင်းဆိုရင် လက်နက်တိုက်အရှေ့က အရိပ်ကောင်းတဲ့ ဗံဒါပင်ကြီး အောက်မှာထိုင်ပြီး တူသေးသေးတစ်ချောင်းနဲ့ ဗံဒါစေ့ထုစားတာ ပြန်စဉ်းစားမိတော့ အခုတောင် စားချင်စိတ်ပေါ်လာသေး။
စနေနေ့တွေဆိုရင် လှည်းတန်းဘူတာကနေ မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး မြို့ထဲမှာ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြလေ့ရှိသေးတယ်။ ရထားခက ပြားသုံးဆယ်။ ဘုရားလမ်းဘူးတာမှာဆင်း … စကော့ဈေးကို ဖြတ်ထွက်ပြီးရင် ရုပ်ရှင်ရုံတွေဖက် လမ်းလျှောက်သွားတာပေါ့။ အများအားဖြင့် ပပ၀င်းနဲ့ ဂုဏ်ရုံမှာ ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြီးရင် လဟာပြင် ဈေးထဲမှာ ဆီချက်ဝယ်ကျွေးတယ်။
အဖေ မိထ္ထီလာရှမ်းတဲလေတပ်ကို ပြောင်းရတော့လည်း ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက် လိုက်နေဖြစ်သေးတယ်။ အရာရှိရိပ်သာ လူပျိုဆောင်အခန်းမှာပဲ။ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြန်စဉ်းစားရင် ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ဆုံးမှာကို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့သားတော်မောင်လေးကိုလည်း အဖေက ကျွန်တော့်ကို ပြုစုပျိုးထောင် ပေးသလောက် ကောင်းကောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလားလို့တောင်တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ အဖေ့ရဲ့ training အထိုက်အလျောက် ရအောင်ဆိုပြီး မောင်ထွန်းလင်းထွန်းကို အဖေတို့အိမ်ဖက် တစ်ပတ် နှစ်ခေါက်လောက် သွားသွား ပို့ပေးနေတယ်။ အဖေတို့အမေတို့လည်း သူတို့မြေးဦးလေးဆိုတော့ ကလေးသွားပို့ရင်ပျော်တာပေါ့။
သားလေးရပြီးမှ Life is Beautiful ရုပ်ရှင်ကားကို ဟိုးတလေလေးက Family TV5က ပြန်ပြလို့ ကြည့်မိတယ်။ မျက်ရည်ကျပြီး စူးစူးနစ်နစ်ခံစားရတယ်။ အရင်ကြည့်တုန်းက ၀မ်းနည်းခံစားရပေမဲ့ မတူဘူး။ ဘေးမှာ ကွေးကွေးလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့ သားလေးကိုလှည့်ကြည့်ရင်း ရုပ်ရှင်ကားထဲက ကလေးအဖေလောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်တောင် အဖေ အတတ်နိုင်ဆုံး သားကလေးကို စောင့်ရှောက်ပျိုးထောင်ပေးသွားမယ်လို့ … စိတ်ထဲကပြောနေမိတယ်။
Posted by little moon at 11:33 AM No comments:
မနေ့ကသားသား အသက်တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့။ ဧည့်သည်တွေမဖိတ်ဖြစ်တော့ပဲ နှစ်ဖက်အဖိုးအဖွား အန်တီများ သားရဲ့ဝမ်းကွဲမောင်နှမများနဲ့ပဲ မွေးနေ့ပွဲလေးကို အိမ်မှာပဲလုပ်ပေးဖြစ်တယ်။
ကိတ်မုန့်ကတော့ မော်လမြိုင်ရောက် သူ့ဒေါ်ကြီး sponsor လုပ်သွားတာပေါ့။
တီတီနှစ်ယောက်က ဘောလုံးတွေဝယ်လာပြီး မှုတ်ပေးသေးတယ်။ သားကြိုက်တယ်ဗျ။
ဖေဖေ မေမေတို့ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် ကားပုံတဲ။ အထဲမှာ ရောင်စုံဘောလုံး တစ်ရာပါတယ်ဗျ။
သားမွေးနေ့လက်ဆောင်ရတဲ့ ငါးဖန်ချိုင့်လေးပေါ့။ သားကတော့ တစ်ခါတည်း လက်နှိုက်ထည့်ပြီး ငါးဖမ်းဖို့ လုပ်တော့တာပဲ။
Posted by little moon at 1:16 PM6comments:
Kiss2ဒုတ်ခ
သိပ်မကြာသေးခင်က ကိုယ့်မဟေသီ ဂျပန်ကအပြန် Canon EOS Kiss-2 (450D) တစ်လုံးဝယ်လာလေရဲ့။ ၀ယ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရင်းက ဂျပန်ကိုအသွား အိမ်မှာ ကင်မရာမေ့ခဲ့ပါလေရော။ တိုကျိုရောက်တော့ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ်ကပေါက်လာ ကင်မရာကမရှိ .. အဲဒီတော့ ၀ယ်ရိုက်မယ်ပေါ့။ အိမ်မှာက အသေး တစ်လုံး (Sony CyberShot) တစ်လုံးရှိပြီးသားလဲဖြစ်နေ ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က တစ်ချိန်မှာ SLR တစ်လုံးဝယ်မယ်လိ်ု့ ပြောထားဖူးတော့ ၇သိန်းခွဲလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဲဒါကြီးကို ၀ယ်ချလာပါလေရော။
၀ယ်လာတော့လဲ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။ ဒီကင်မရာလေးရမှ ကိုထွန်းခိုင်ကြီး ကင်မရာကြီးယူခဲ့ပါဦး စမ်းကြည့်ရအောင် ဓါတ်ပုံထွက်ရိုက်ရင်ခေါ်မယ်နော်... စသည်ဖြင့် ဓါတ်ပုံဆရာမိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ လူရာသွင်းမှုကို ခံရလို့လဲ ၀မ်းသာရသေး ခွိ။ ဓါတ်ပုံရိုက်မှ ကင်မရာကြီးရှိမှ လူရာဝင်ပေသကိုး။ ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး။
ဒါကြီးရပြီးတော့ မျောက်အုန်းသီးရသလို ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပေါ့။ မွန်ဂိုလီးယားသွားတုန်းက ဒါကြီးယူသွားဖြစ်လို့ ရှုခင်းတွေ ရိုက်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ Kit Lens 18-55 နဲ့ပဲဆိုတော့ တစ်ချို့ပုံတွေရိုက်ရတာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ။ တယ်လီဆွဲရိုက်ချင်သလိုလို အပါချာကျယ်တဲ့ မှန်ဘီလူးမျိုး လိုချင်လာသလိုလို ... အင်း ငွေတော့ ထပ်ကုန်ချေတော့မည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ရက်နှစ်ရက်က ကြည့်ဖြစ်တော့ အားပါးပါး ကင်မရာကြိုးမှာ မှိုတွေကပ်နေပါလား ဒါနဲ့ ပြူးတူးပြဲတဲ နဲ့ ပျက်ပြီလားဆိုပြီး နားလည်သူများကိုပြရသပေါ့။ တော်သေး၏။ Lens တို့ Sensor တို့အထိ မှိုမရောက်သေး။ ဒီအတိုင်းပဲ သူ့အိတ်ထဲထည့်ပြီး ဘီဒိုထဲ ထည့်ထားတာကိုး။ ကိုသူရကြီးကတော့ dry box ဆိုလားဝယ်ပြီး သိမ်းရမတဲ့ တစ်သိန်းခွဲ နှစ်သိန်းလောက်ရှိသတဲ့ မြတ်ချွာဖျား .... lens ၀ယ်ချင်လို့ ယားနေတာတောင် ပိုက်ပိုက် သိပ်မရှိလို့ ငြိမ်နေရတာကို။ ဒါပေမဲ့ သုံးလေးသောင်းလောက် အကုန်ခံပြီး box တစ်မျိုးနဲ့ ထည့်သိမ်းလဲ ရသတဲ့။ လောလောဆယ်တော့ ဘုရားစင်ထဲထည့်ပြီး ၂၄နာရီမီးထွန်းထားတယ်။ ကောင်းရော။ ယောက်ခမကတော့ မနက် ဘုရားရှိခိုးရင် ကိုယ်တို့ရဲ့ Canon Kiss-2 ကြီးကိုပါ အဆစ် ကန်တော့နေရလေရဲ။ သာဓု သာဓု သာဓု .... :D
Posted by little moon at 9:08 PM3comments:
သူ့အမေချုပ်ပေးထားတဲ့ ၀တ်စုံအသစ်နဲ့ စတိုင်ကျနေတဲ့ သားသား
Posted by little moon at 4:21 PM 1 comment:
Posted by little moon at 7:32 AM5comments:
Posted by little moon at 7:11 PM2comments:
MNL Cup အဖွင့်နိဒါန်း
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Pro League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က စပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ အသင်း ၈သင်းနဲ့ စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထရိတ်ဒင်း ဦးတေဇရဲ့ Yangon FC, Alpine ဒေါက်တာစိုင်းရဲ့ ရတနာပုံ FC, UMFCCI ဥက္ကဌကြီးရဲ့ ဇေယျာရွှေမြေအသင်း, ကမ္ဘောဇဘဏ်ရဲ့ KBZ အသင်း, IBTC (Grand Royal) ရဲ့ ဥသာယူနိုက်တစ် အသင်း၊ Asia World ရဲ့ မကွေးFC, ယုဇနဦးဌေးမြင့်ရဲ့Southen Myanmar FC နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းသားတို့ရဲ့ Delta United အသင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းကစလို့ Stage Show တွေနဲ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ခမ်းခမ်းနားနားကို ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဖွင့်ပွဲနေ့မို့ ပရိသတ်ကလည်း စိတ်ဝင်တစားကို ကွင်းလုံးပြည့်လျှံအောင် လာကြည့်ကြတယ်။ ကွင်းက တာဝန်ရှိသူတွေ စီစဉ်ထားမှု ညံ့ဖျင်းတာကြောင့် လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးသူများတောင် ကွင်းထဲဝင်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ် သောင်းနဲ့ချီပြီး တဖွဲဖွဲလာနေကြတာကို ဆုံလည်နဲ့ တစ်ဦးစီ ၀င်လိ်ု့ရတဲ့ ၀င်ပေါက်ကလေး ကို ဂိတ်နေရာနှစ်ခုထဲမှာ လေးပေါက်သာ ဖွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများ ကလည်း အဆင့်အတန်းနိမ့်နေပါသေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက စီစဉ်မှုညံ့ဖျင်းခဲ့ရင်တောင် စည်းကမ်းတကျ စနစ်ရှိရှိ အဆင့်ရှိရှိလေး တန်းစီ ၀င်ကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးလေး နည်းနည်းမှကို မရှိကြဘူး။ ဝေး ၀ါး နဲ့ အော်ဟစ်ပြီး အပေါက်သေးသေးလေးကို အတင်းတိုးဝှေ့နေကြတော့ လဲတဲသူလဲ နဲ့ အနာတရတွေ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလို့သာအော်ဟစ်နေတာ ဒီလိုလူမျိုးတွေ သေနတ်နဲ့ပဲတန်တယ်လို့ တောင် စိတ်ထဲ အချဉ်ပေါက်သွားမိတယ်။
ရုံးကနေ ကိုမြင့်ကြိုင်အပြင်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ပါကြည့်ဖို့လိုက်လာတာ တိုးဝှေ့ရင်း သူတို့နဲ့ ကွဲသွားတယ်။ ကွင်းထဲရောက်တော့ နှစ်နာရီခွဲတော့မယ်။ တစ်ကွင်းလုံး လျှံနေပြီ။ ဇေယျာရွှေမြေ ကိုယ်စားပြု အ၀ါရောင်ဂျာစီတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက အထူးတန်းမြောက်ဖက်မှာ၊ အစိမ်းရောင် ၀တ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ပရိသတ်က တောင်ဖက်ခြမ်းမှာ။ ထိုင်စရာနေရာရှာရင်း ဇေယျာရွှေမြေ ပရိသတ်တွေ ကြားထဲ ရောက်သွားတယ်။ စတိတ်ရှိုးရှိတော့ ဆူညံပွက်ပြီး လူတွေကလည်း ထလိုက်ထိုင်လိုက် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာကို သည်းခံပြီး ခဏထိုင်နေရတယ်။
သုံးနာရီကျော်ကျော်မှာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်တယ်။ တော်တော်လေးကို ခမ်းနားအောင် စီစဉ်ထားတာပဲ။
ပြိုင်ပွဲက လေးနာရီမှာ စတယ်။ ပရိသတ်ကအားပေးကြတော့ ကစားသမားတွေကလည်း ကြိုးစား ကန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အများမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဇေယျာရွှေမြေအသင်းက ပထမ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ဦးဆောင် ကစားနိုင်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်အသင်းက တဖြေးဖြေး ကစားကွက်မိလားပြီး လေးဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ နိုင်သွားတယ်။
ပရိသတ်တွေ စည်းကမ်းမရှိတာကို ထပ်ပြောချင်သေးတယ်။ ပွဲကစားချိန်မှာ ထိုင်လိုက်ထလိုက်လုပ်နေတာတို့ အသင်းအလံကြီးတွေကို အများမြင်ကွင်းကွယ်အောင် ဝှေ့ရမ်းနေတာတို့ အိုးစည်ဗုံမောင်းတွေကို Non-Stop ဆူညံအောင်တီးနေတာတို့၊ ကွမ်းတံတွေးထွေးထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို လူကြားထဲ ပစ်ထဲလိုက်တာတို့ တွေ့နေရသေးတယ်။ ဒါမျိုးတွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပျောက်ကွယ်သင့်ပြီ။ ဘောလုံးပွဲက Pro ဆိုရင် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကလည်း ထိုက်တန်တဲ့ အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိသင့်ပြီ။ ကွင်းက သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေလည်း လက်မှတ်ဝယ်ပြီး လာကြည့်တဲ့သူတွေကို မဆလခေတ် သမ၀ါယမ စာရေးမ ဆက်ခံသလိုမလုပ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Customer အဖြစ် ကိုယ့်ကို ထမင်းကျွေးနေသူတွေအဖြစ် လေးလေးစားစား Service ပေးသင့်ပြီ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပရိုစနစ်ဆိုတာကိုတော့ စလိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကစားသမားလေးတွေလဲ အရင်က သုံးလေးသောင်း စာရေးစာချီ ရာထူးလောက်နဲ့ ဌာနတွေမှာ ကစားနေခဲ့ကြရာက အခုဆို တစ်လကို နှစ်သိန်းသုံးသိန်းကနေ ဆယ်သိန်းအထိရလာကြပါပြီ။ နည်းပြများလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို ဒီ ပရိုအသင်းတွေက လစာအပါအ၀င် ကုန်ကျစရိတ် သိန်း သုံးထောင်ကနေ ငါးထောင်အထိရှိမယ်လို့ မှန်းကြပါတယ်။ အခု ပွဲဦးထွက် MNL Cup က ပထမရရင် သိန်း ၅၀၀ရပါမယ်။ ကွင်းဝင်ကြေးကို တော့ အသင်းတွေက ၄၀%ရမှာပါ။ အထူးတန်းဝင်ကြေးက တစ်ထောင်၊ ရိုးရိုးတန်းက ငါးရာကျပ်ပါ။ အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ ပျှမ်းမျှ တစ်ပွဲကို ဆယ့်ငါးသိန်းကနေ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အခုပွဲမှာ အသင်းတွေက ၁၄ပွဲကန်ရပါမယ်။ ကွင်းဝင်ကြေးအနေနဲ့ သိန်း ၂၀၀နဲ့ သုံးရာကြား လောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက အခုနှစ်ပွဲကန်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တွေ့ရသလောက် ကွင်းထဲက ပရိသတ်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က အသင်းတွေကို အားပေးဖို့ ပိုင်ရှင်တွေက သူတို့ ၀န်ထမ်းတွေ နီးစပ်ရာတွေကို လာအားပေးခိုင်းတဲ့ပုံပဲ။ ရန်ကုန်ပရိသတ်ဆို Air Bagan နဲ့ ထူးထရိတ်ဒင်းက ၀န်ထမ်းတွေ ကားကြီးကားငယ်နဲ့ လာကြတာ။ ဒုတိယနေ့ကဆိုလဲ ရတနာပုံ ပရိသတ်တစ်ဝက်က Alpine ကလူတွေ။ Southen ကို လာအားပေးကြတာက ဦးလှမောင်ရွှေကြီးတဲ့ ငါးအဖွဲကလူတွေ။ ဒါဆို ကွင်းဝင်ကြေးရတဲ့ ပိုက်ဆံရဲ့အနည်းဆုံး သုံးပုံတစ်ပုံက ကိုယ်ပေးရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေလို ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီတော့ သူတို့ အသုံးစရိတ် တစ်နှစ်သိန်းသုံးထောင်ဆိုတာကို ဘယ်လို ပြန်ရှာရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လဲ တွေးကြည့်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ နောက်ထပ်ဖလားတစ်ခုရှိတယ်ထားလိုက်ပါဦး။ ဖလား နှစ်လုံးစလုံး ရတဲ့အသင်းမှ ဆုကြေးငွေက သိန်းတစ်ထောင်လောက် ကွင်းဝင်ကြေးက သိန်းလေးငါးရာ။ အသုံးစရိတ်ရဲ့ တစ်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်။
ရတနာပုံက ဆရာစိုင်းကတော့ တစ်ရှယ်ယာ ငါးသိန်းနဲ့ သိန်းငါးထောင်ဖိုး အများကို ထုတ်ရောင်းပြီး အသင်းကို Public လုပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို အသင်းအမြတ်ရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း Dividend ခွဲပေးမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မမြတ်ရင်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ ဆိုလိုတာလားမသိ။ ဒါဆို အတိုးမဲ့ ငွေသိန်းငါးထောင်လောက် အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာ လှည့်သုံးနေဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့။ ဘဏ်ကချေးရင်တောင် အတိုးပေးနေရဦးမယ်။ ပိုင်လိုက်တာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုစတင်လိုက်တဲ့ ပရိုစနစ်လေးကို ရေရှည်ဘယ်လို တည်တံ့သွားအောင် တိုးတက်လာအောင် ဘာတွေ ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Posted by little moon at 11:08 AM 12 comments:
Labels: Myanmar Football
အင်တာနက်ကြီးတစ်လကျော်လောက် ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ကိုလဲ ရေးအားကျလာတယ်။ တစ်လလောက် မရေးပဲနေတာအကျင့်ဖြစ်သွားလားမသိ။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်ပြန်ရလာပြီ ဆိုပေမဲ့ မီးပျက်တဲ့အချိန်မှာ မီးစက်နဲ့ သုံးရရင် စက်အရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိတာကြောင့် ကိုယ်တွေက မသုံးဖြစ်တာ များတယ်။
အင်တာနက်ရပြီး မီးလာလို့ အားတဲ့အချိန်တွေကျတော့လဲ face book ထဲက game လေးတွေဖက် အာရုံရောက်နေလို့ ဘလော့မရေးဖြစ်။ ဘာမှမရေးဖြစ်ပေမဲ့ တက်နေတဲ့ ဧည့်သည်အရေအတွက်ကို မြင်ရရင်တော့လည်း အားနာသလိုလို။ ဒါပေမဲ့လည်း ပို့စ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး အတင်းကြီး အားထုတ်ပြီး ရောင်းတန်ဝင် ပို့စ်များလဲ မရေးချင်။
ပုံမှန်လာရောက်ကြသော သူငယ်ချင်းများကို အားနာမိပါသည်။ သို့သော် အရင်ကထက်စာရင် ရေးဖြစ်မည့် ပို့စ်အရေအတွက်က နည်းလာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ..... ဘလော့တော့ ဆက်ရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ။
Posted by little moon at 6:11 PM2comments:
Arsenal 1 :3ManU
အဝေးကွင်းမှာ တစ်ဂိုးတည်းနဲ့ ရှုံးထားခဲ့တယ် ဆိုတော့ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ မနေ့ညက Champions League Semi-Final ပွဲကို ထကြည့်မိတယ်။ အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကွင်းမှာ 2-0 3-1 လောက် ကြိုးစား ကန်နိုင်ရင် ဗိုလ်လုပွဲ တက်ပြီပေါ့။ ဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ လက်ရှိ မန်ယူရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ လူအင်အားအရ ဖြစ်ဖို့ မလွယ်မှန်းတော့ သိနေပါတယ်။ အလွန်ဆုံး သရေ သို့မဟုတ် အာဆင်နယ်က 2-1 အနိုင်လောက်နဲ့ မန်ယူတက်သွားနိုင်တယ်လို့ မှန်းထားတာ။
ညတစ်နာရီအိပ်ရာက ပြန်ထပြီး တီဗွီလေးဖွင့်ကြည့် ပွဲစပြီး ထိုင်ကြည့်တာ ဖင်တောင်မပူသေးဘူး။ တစ်ဂိုးပေးလိုက်ရပြီ။ အတွေ့အကြုံနည်းတယ် လူငယ်နောက်တန်းကစားသမားလေးရဲ့ အမှားကြောင့် ပေးလိုက်ရတာ။ သိပ်မကြာပါဘူး ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ရင်သပ်ရှုမော ပြစ်ဒဏ်ဘောကနေ နောက်တစ်ဂိုး ... သွားပါပြီ။ ဆယ်မိနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ် ပွဲကပြီးသွားပြီ။ အာဆင်နယ် ဗိုလ်လုပွဲတက်ဖို့ဆိုရင် လေးဂိုးပြန်သွင်းရမှာ။ အဲဒီအချိန်မှာ မန်ယူက ခံစစ်နဲ့ ပိတ်ပြီး စိတ်အေးလက်အေးကစားနေပြီ။ ခဏလောက်ဆက်ကြည့်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျသွားတာနဲ့ ဆက်မကြည့်တော့ဘူး။ တီဗွီကို ပိတ် အိပ်ယာထဲဝင်လှဲနေပေမဲ့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော် တော့ဘူး။
ဒီနှစ်လဲ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်ပြန်ပြီ။ လူငယ်တွေကိုပဲ အားကိုးတဲ့ ချွေတာရေးလမ်းစဉ်ကို ဆက်လိုက်နေရင် အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ဒီလိုပဲ အလယ်အလတ်အဆင့် အသင်းတစ်ခုနေရာမှာပဲရှိနေတော့မှာပဲ။ ရာသီကုန် အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ မန်နေဂျာ ၀င်းဂါးကြီး ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုပဲ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ ....
သင်္ကြန် ... တစ်နှစ်တစ်ခါ မြန်မာတွေ နှစ်သစ်ကူးတဲ့အချိန်အခါ။ မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်အခါ။ ပျော်မြူးကြတဲ့ အချိန်အခါ။ ပျော်ပျော်ပါးပါးရေပက်ကစားကြရင်း နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ (စိတ်အညစ်အကြေးတွေလဲ ပါပေမပေါ့)ကို အတာရေနဲ့ဆေးကြောပြီး နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြတယ်။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဓလေ့စရိုက်လေးပါ။
ဒါပေမဲ့ အခုနှစ်ပိုင်းသင်္ကြန်မှာ ပျော်ပါးကြပုံတွေကို ဘ၀င်မကျဖြစ်လာမိတယ်။ အဟောသိကံ ဖြုန်းတီး နေကြတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်လက်ရှိ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ အင်မတန်မှ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ရော တိုင်းပြည်အနေနဲ့ရောပဲ။ သောက်သောက်လဲကုန်လိုက်တဲ့ငွေတွေ။ ကုန်တာနဲ့ ရတဲ့ အပျော်နဲ့ တန်ရဲ့လားမသိ။
ဥပမာပဲဆိုပါတော့ အင်းယားလမ်းမှာတင် မဏ္ဍပ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုပါစို့ (ကျော်တော်ကျော်ဦးမယ် ထင်တယ်)။ တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ သင်္ကြန်လေးရက်စာ စရိတ်က သိန်းတစ်ရာကနေ တစ်ရာ့ ငါးဆယ်လောက် အထိရှိမယ်။ သိန်းသုံးထောင် သိန်းလေးထောင်လောက် ပိုက်ဆံတွေကို သုံးလေးရက်လောက်အတွင်းမှာ အလဟသ ဖြုန်းပစ်ကြတယ်။ Money Circulation ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမဲ့။ တော်တော်များများ ပိုက်ဆံတွေဟာ အင်းယားလမ်းမပေါ် အိုင်ပြီး စီးနေတဲ့ ရေတွေနဲ့အတူ မြောင်းထဲကို ပါသွားတာပါပဲ။ ဘန်ကောက်က သင်္ကြန်ပွဲတောင် ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်လောက်ငွေသုံးဖြုန်းကြရဲ့လားမသိ။ လေ့လာကြည့် ချင်သေးရဲ့။
လက်မှတ်တစ်စောင် သုံးလေးသောင်းနဲ့ ၀ယ်ပက်ကြတဲ့သူတွေကလဲအပြည့် မဏ္ဍပ်အားလုံး ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ။ ကိုယ်လဲ ဒီနှစ်တစ်ရက်ရောက်သေးတယ်။ အင်းယားလမ်းက EMBA မဏ္ဍပ်ကို။ ပြည့်ကြပ်ပြီး ဘုရား ပွဲဈေးတန်းလို လျှောက်နေကြတဲ့ လူတွေကို ပိုက်ကလေးတွေနဲ့ စင်ပေါ်ကနေ ပက်နေကြလေရဲ့။ သီချင်းသံတွေကလဲ စင်တစ်ခုတစ်မျိုး နဲ့ ဆူညံပွက်နေရော။ DJ နဲ့ Sound System ငှားရတာတင် မနဲဘူး။ စင်သုံးလေးခုကို Sound System တစ်ခုနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်ပေးထားရင် အတော် စရိတ်သက်သာမယ်လို့ တွေးမိသေး။ ကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက် တစ်ရက်စာ လက်မှတ်ဖိုး နှစ်သောင်း ထွက်သွားလေရဲ့။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြရင်၊ ရွှေရင်အေးလို မုန့်တစ်ခုခုလုပ်ပြီး အိမ်နီးချင်းတွေဝေရရင်၊ ၀ီစကီတစ်လုံးဝယ်ပြီး အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေး ဇိမ်ခံသောက်ရင် .... မျက်မှန်ပါ အဆစ် ကျပျောက်လို့ အသစ်လုပ်ခငွေထပ်ကုန်သေး။
ကလေးတွေ ကလေးမတွေကလည်း ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိ။ သောက်မယ် ပျော်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ မနက် ၁၁နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ မူလို့အန်နေတဲ့ ကလေးမတစ်ယောက်ရယ်၊ ၀ိုင်းပြီးနှိပ်ပေးနေကြတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းမလေးတွေရယ် တွေ့မိသေးရဲ့။
ပျော်စရာမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ငွေကို ခင်းပြီးလို့ မဲတင်းပြီး ရှာကြံပျော်နေကြတာလားမသိ။ ကိုယ့်အတွက်တော့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ မဏ္ဍပ်အနောက်ဖက်မှာ ခုံလေးခင်းပြီး အရက်ထိုင်သောက် စကားစမြီပြောတာလေးကမှ ပျော်စရာကောင်းသေး။ အင်း.... ရင်ခုန်သံမတူတော့တာလဲဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်အသက်ကြီးသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။
Posted by little moon at 11:31 AM2comments:
သားလေးက မတ်တတ်စမ်းရပ်နေပြီ။ ဘယ်သူ့ကမှ ကိုင်မပေးထားပဲ သူ့ဖာသာရပ်နေရင် စက္ကန့်သုံးဆယ် တစ်မိနစ် နီးပါးရပ်နေလေရဲ့။ ပြီးရင်တော့ သူ့ဘာသာ အသာလေး ပြန်ထိုင်ချလိုက်လေ့ရှိတယ်။ လိမ့်မကျတော့ဘူး။ ကိုင်စရာတွေရှိရင် ဘေးတိုက်လေး လမ်းလျှောက်တယ်။
သွားက လေးချောင်းပေါက်နေပြီ။ အောက်ဖက်က နှစ်ချောင်း အပေါ်ဖက်ကနှစ်ချောင်း။ အောက်သွားနှစ်ချောင်း ပေါက်နေတာကတော့ ခြောက်လသား လောက်ကတည်းကပဲ။ အပေါ်သွား နှစ်ချောင်းမှာ တစ်ချောင်းက အရင်စပေါက်ပြီး နောက်တစ်ချောင်းက အခုရက်ပိုင်းမှ ထွက်လာတာ။
အစားအသောက်ကလည်း မှန်နေတာပဲ။ ငါး၊ ကြက်သားတို့နဲ့ ဆန်ပြုတ်စားတယ်။ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးစားတယ်။ နို့ဗူးသောက်တယ်။ အခုဆို ၁၉ပေါင် ပေါင်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပြီပေါ့။
အခုလာမဲ့ မေလ ၆ရက်နေ့ဆိုရင် ကိုးလ ပြည့်ပြီ။
Posted by little moon at 5:01 PM3comments:
တစ်လခွဲလောက်ရှိပြီထင်တယ်။ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဘလော့ရေးရန် အခွင့်မသာခဲ့တာ။ မရေးဖြစ်ပေမဲ့ Reader နဲ့ သူများရေးတာတွေတော့ မကြာခဏ ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဖန်ကြိုးမျှင်ကြီးကို ပြင်နေတယ်ဆိုကတည်းက connection တွေက လိပ်လိုနှေးပြီး ဘလော့ ရေးဖို့ နေနေသာသာ အီးမေးတောင် မနည်း စစ်ရတာ။ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ပေါ့။ ဒီကြားထဲ သားလေးက အထက်လှန် အောက်လျှောဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတစ်ပတ်လောက်တင်လိုက်ရသေးတယ်။ တော်သေးတယ် အချိန်မီလေးတင်။ စိတ်ပူလိုက်ရတာ။ အခုတော့ ကျန်းကျန်းမာမာပဲ ရှစ်လကျော်ကျော်မှာ လေးဖက်သွားတာ ကတော့ အရမ်း မြန်နေပြီ။ မတ်တပ်စမ်းရပ်နေပြီ။ စက္ကန့် ၂၀၊ ၃၀လောက် သူ့ဖာသာ ရပ်နိုင်နေပြီ။ နောက်မှ သူ့ပုံလေးတွေ တင်ဦးမယ်။
သင်္ကြန်တွင်းကတော့ ထူးထူးခြားခြားရယ်လို့ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အကျနေ့က ညီလေးဝင်ထိန်အိမ်မှာ မိသားစုလိုက်သွားပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတာပေါ့။ ကိုရဲတို့လင်မယားရယ်၊ ကိုဇော်မိုးနဲ့ သူ့သမီးလေးရယ် ကိုယ့်တို့ မိသားစုသုံးယောက်ရယ်။ အကြတ်နေ့မှာတော့ ကိုသူရကြီးခေါ်တာနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် အင်းယားလမ်းက EMBA မဏ္ဍပ်ကို သွားဖြစ်တယ်။ ရေမပက်ဖြစ်ပါဘူး မဏ္ဍပ်အနောက်ဖက်မှာ ခုံလေးခင်းပြီး တောက်လျောက်ပဲ အရက်သောက်ဖြစ်ကြတယ်။ မိန်းမနဲ့ အင်းယားလမ်းပေါ် မဏ္ဍပ်တွေ ငေးမယ်ဆိုပြီး ညနေဖက်လျှောက်လိုက်မိပါတယ် လူတိုးလို့ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ လှမ်းထိုးလို့ရယ်နဲ့ ကိုယ့်မျက်မှန် ပျောက်ခဲ့တယ်။ ကောင်းရော။ အသစ်ရတာပေါ့ :)
အင်တာနက်အထိုက်အလျောက် ပြန်ကောင်းလာပေမဲ့ ဘလော့ကို ဘယ်လိုမှ ၀င်မရတာ ဒီနေ့မှပဲ ရတော့တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနက်က အမကြီးခင်ဦးမေ ရုံးနားက ကော်ဖီဆိုင်ကို လာပြီး အအေးတိုက် မုန့်ကျွေး သွားလေရဲ့။ ကျွန်တော်ကျွေးပါရစေ ဆိုတာတောင်လက်မခံဘူးရယ်။ ဒါနဲ့ ကိုနဗနရယ် အသင့်ရောက်နေတဲ့ မောင်ကေ(စမ်းချောင်း)ရယ် အမကြီး ကျွေးသမျှ နင်းကန် စားကြလေသတည်းပေါ့ :D အပြန်မှာ သူ့ကားပေါ်ပါလာတဲ့ သရက်သီးတွေပါ ပေးသွားလေရဲ့ ကောင်းလေစွ။ နောက်လဲ မကြာမကြာ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာလည်ပါလို့ မှာလိုက်သေးတယ်။
အမကြီး မုန့်လာကျွေးသွားလို့ဖြစ်မယ် ဒီနေ့ ဘလော့ထဲဝင်လို့ရသွားတယ် .....
Posted by little moon at 12:40 PM 8 comments:
Warren Buffett ရဲ့ ၂၀၀၉ အတွက် အကြံဥာဏ်
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် Voice ဂျာနယ် (Vol.5/No.21) မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးလေးထဲက ကြိုက်လို့ ဆွဲထုတ်ပြီး ဘလော့မှာ တင်ထားပါတယ်။
အလုပ်ကိုကြိုးစားခြင်း - ကြိုးစားသမျှတော့ အရာထင်ပါလိမ့်မယ်။ "လေ" သာ တွင်တွင်ကြီးပစ်နေရင် ဆင်းရဲတွင်းထဲ ပြုတ်ကျဖို့သေချာတယ်။
ပျင်းရိခြင်း - အိပ်ပျော်နေတဲ့ ပုစွန်ကတော့ ရေစီးအတိုင်း မျောသွားမှာပဲ။
ငွေရပေါက် - အလုပ်တစ်ခုတည်းအားမကိုးပါနဲ့။ အနည်းဆုံးနောက်ထပ် ရင်းနှီးမှုတစ်ခုက ငွေရပါစေ။
အသုံးအစွဲ - သင်မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလျှောက်ဝယ်နေမိပြီဆို၊ မကြာခင်လိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းရတော့မယ်။
စုဆောင်းခြင်း - သုံးပြီးလို့ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို မစုပါနဲ့။ စုပြီးလို့ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို သုံးပါ။
ချေးငှားခြင်း - ပိုက်ဆံချေးသူဟာ ကြွေးရှင်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တတ်တယ်။
စာရင်းဇယား - သင့်ဖိနပ်စုပ်နေမှတော့ ထီးယူလာလည်း အသုံးမ၀င် တော့ပါဘူး။
အသုံးစာရင်းကို ပြန်ဆန်းစစ်ခြင်း - အသေးသုံးလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။ အပေါက်သေးသေးလေး တွေကြောင့် သင်္ဘောကြီးတွေနစ်ရတယ်။
ဖောင်ဖျက်ခြင်း - ခြေနှစ်ချောင်းလုံးနဲ့ မြစ်ရဲ့အနက်ကို မစမ်းသပ်ပါနဲ့။ (အရန် အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိပါစေ။)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - သင့်ရဲ့ကြက်ဥတွေအားလုံးကို ခြင်းတစ်ခုတည်း မထည့်ပါနဲ့။ (ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမထားနဲ့)
Posted by little moon at 3:07 PM2comments:
မြန်မာဘောလုံးလောကကို ပရိုပုံစံအသွင်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို အားလုံးကြားပြီးကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုအသွင်ပြောင်းရာမှာ အခက်အခဲတွေအများကြီး ရှိပေမဲ့ အခုလို စလိုက်နိုင်တာ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးရှစ်ခုက အသင်းရှစ်သင်းစထောင်မှာပါ။ မကြာခင်ဒီမှာလဲ ဘောလုံးသမား အပြောင်းအရွှေ့ကြေးတွေရှိလာတော့မယ်။ ဘောလုံးကိုသာ ပြောင်မြောက်အောင်ကစားပြ၊ လူမွှေးလူတောင် ပြောင်ပြီး စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တကယ့်ကို ၀မ်းသာမိပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Alpine သောက်ရေသန့်ကအကြီးအကဲ ဦးစိုင်းပြောသွားတာ သဘောကျတယ်။ ဘောလုံးအကြောင်းတော့ မသိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးအရအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါမယ်တဲ့။ ကောင်းတယ်။ စီးပွားရေးအရအောင်မြင်ပြီး sustain လုပ်ထားနိုင်မှ ဘောလုံးသမားတွေလဲဝင်ငွေတိုးလာပြီး ဘောလုံးကစားတဲ့ အဆင့်အတန်းလဲ တိုးတက်လာမှာပေါ့။ နိုင်ငံခြားသားဘောလုံးသမားတွေ ကိုယ့်အသင်းမှာ ငှားခွင့်ရှိတယ် ဆိုတော့ ဘောလုံးခြေစွမ်းမြင့်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူကစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံလဲရတာပေါ့။
ကစားတာအဆင့်အတန်းမြင့်လာရင် ပရိသတ်ဆိုတာလဲ ကွင်းထဲပြန်ရောက်လာမှာပါ။ ကွင်းအတွင်း ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်တို့၊ ဘောသုံးသမားအင်္ကျီမှာ Sponsor တံဆိပ်ထိုးတာတို့၊ TVကပြတာ စသည်ဖြင့် တဖြေးဖြေး ဖြစ်လာမှာပေါ့။
ပရိုအကြောင်းပြောနေရင်း တစ်ချိန်က ဘောလုံးပွဲတွေကို ပြန်သတိရမိတယ်။ ၁၉၉၀၀န်းကျင်း မြို့ထဲ MCC မှာ သင်တန်းတက်ပြီး Job Training ဆင်းနေစဉ် ကာလပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အဖေကြီး (ဆရာZZM) ကစပြီးခေါ်သွားလို့ အောင်ဆန်းကွင်းက ပထမတန်းပွဲတွေကို စကြည့်ဖူးခဲ့တယ်။ အရင်က တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ပွဲလောက်ပဲ ကြည့်ဖူးတာ။ အောင်ဆန်းကွင်းကို များသောအားဖြင့် အထူးတန်းကကြည့်လေ့ရှိတယ်။ တောင်ဖက်တန်းနားနီးတဲ့ အလယ်တန်းလောက်မှာထိုင်လေ့ရှိတယ်။ အရှေ့သံပန်းစင်ပေါ်ကလည်း ကြည့်ဖူးတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကိုသန်းတိုးအောင်တို့ခေတ်ပေါ့။ သူက ဆောက်လုပ်ရေးက။ မျိုးလှိုင်ဝင်း၊ တင်မြင့်အောင်၊ ဇော်နိုင် သူတို့က ကာစတန်က။ အဖေကြီးကတော့ စိုးမိုးတို့ သိန်းထွန်းတို့ ထွန်းထွန်းထက်တို့ပါတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအသင်း ကို အားပေးတယ်။ ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးကို အားပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကတည်းက ကာစတန် အသင်းက အတောင့်တင်းဆုံးပဲ။ မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်တွေအများကြီးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အသင်းတွေက အကြိတ်အနယ်ပဲ။ ကာစတန်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရထား၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆက်၊ စည်ပင်၊ Army.. တကယ့ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ ပွဲဝင်ကြေးက နှစ်ဆယ် အစိတ် လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးရင် အောက်ဆင်းပြီး ဆီထမင်းနဲ့ အမဲကြော်လေးစားဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပွဲကောင်းတဲ့ရက်ဆို အထူးတန်းပြည့်တယ်။ ဗိုလ်လုပွဲလိုပွဲမျိုးဆိုရင် တစ်ကွင်းလုံးနီးပါးပြည့်တယ်။
ငွေခေတ်နောက်ပိုင်း မြန်မာဘောလုံးပွဲတွေကို ကွင်းမှာ သိပ်သွားမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ အခုကာလက ပွဲတွေမှာ ပရိသတ်က ၁၉၉၀ကျော်ကာလကလောက် လာမကြည့်ကြတော့ဘူး။ Premier League ပွဲတွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ခွင့်လာကြောင့်လည်း တစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းပွဲတွေ ခြေစွမ်းညံ့လာပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာတာလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ဘ၀ဟာ သိပ်မတောက်ပြောင်ခဲ့ဘူး။ ၀န်ကြီးဌာန၀န်ထမ်း အဆင့်ပဲရှိတာ။ ကာစတန်ကခေါ်မှာ၊ လေဆိပ်မှာ တာဝန်ချခံရမှာလောက်ကိုပဲ မျှော်နေရတာ။ လက်ရွေးစင်ဖြစ်ရင်တော့ နိုင်ငံခြားသွားကန်ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မျိုးလှိုင်ဝင်းတို့ ကိုကြည်လင်တို့ ၀င်းအောင်တို့က စင်ကာပူ၊ မလေးရှားတို့မှာ ကြေးစားကစားသမားအဖြစ်သွားကစားခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီလို အပြင်ထွက်ပြီး ကြေးစားကစားတာ မရှိတော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခု ပရိုစနစ်ကို ဦးတည်လိုက်ပြီဆိုတော့ တစ်ချိန်ကလိုပဲ ပရိသတ်တွေကွင်းထဲပြန်ရောက်လာပြီး ကစားသမားတွေလဲ အရင်ကနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ လစာငွေတွေ ရတော့မယ် ခြေစွမ်းတွေပြန်ထက်လာမယ် ပွဲတွေကလည်း စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆရတာပဲ။
Posted by little moon at 12:18 PM2comments:
TLT Days out...
သားက မွေးပြီး ဆေးရုံက ဆင်းလာပြီးကတည်းက ညအိပ်ညနေ ဘယ်ကိုမှ မသွားဖူးသေးဘူး။ ဗဟန်းအိမ်မှာပဲပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ၅၂လမ်းက ကျွန်တော့်မိဘများအိမ်ကို အလည်သွားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ညကစလို့ ၅၂လမ်းအိမ်မှာ ခဏပြောင်းနေဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ယောက်ခမကြီးက မုံရွာကို သွားစရာရှိလို့ တစ်ပတ်လောက် ကြာမှာတဲ့။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော်တို့လင်မယား မနက်ရုံးသွားရင် သားကို တစ်နေ့လုံး သူ့အဖွားကပဲ စောင့်ရှောင့်ထားတာ။ အခုအဖွားကခရီးသွားတော့ ကြည့်မယ့်သူမရှိတော့ဘူးပေါ့။
ပထမစဉ်းစားထားတာက အိမ်မှာပဲနေ။ မနက်ရုံးသွားရင်သားကို ၅၂လမ်းအိမ်ဝင်ပို့၊ ညနေရုံးကအပြန်မှသွားခေါ်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါ ခဏသွားနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ မနေ့ညနေက အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လင်မယား သားကို ချီပြီး အဖိုးအဖွားအိမ်ကို ချီတက်သွားကြတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အဖေအမေရယ် ညီမအငယ်ရယ်ကို သားကတွေ့နေကြ ရင်းနှီးနေပြီမို့ သူ့အတွက်လည်း သိပ်ပြဿနာတော့ မရှိလှဘူး။
ညမိုးချုပ်မှပြဿနာစပါရော။ အိုက်လို့ မအိပ်နိုင်လို့ ငိုပါလေရော။ ပုံမှန်အိမ်မှာဆို မီးလေးကလည်းမှန်နေတော့ အဲကွန်းလေးနဲ့ နေနေကြလေ။ အခု မြို့ထဲဖက်က အလှည့်ကျ မီးပျက်တဲ့အပြင် အဲကွန်းလဲမရှိဘူး။ ဒါနဲ့ ယပ်တောင်တွေခပ်ပေးပေါ့။ ညတစ်နာရီလောက်က ပူလို့နိုးလာလိုက်တာ သုံးနာရီကျော်မှ ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။
ဒီမနက်နိုးတော့ သူ့အဖွား (ကျွန်တော့်အမေက) သူ့တပည့်တစ်ယေက်ရဲ့အိမ်တက်အလှူကို တောင်ခေါ်သွား လိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ရုံးလာဖို့ အိမ်ကမထွက်ခင် သူစားပြီးသောက်ပြီး ပြန်အိပ်ပျော်သွားလေရဲ့။ သူ့အတွက် အပြောင်းအလဲတစ်ခုပေါ့။
Posted by little moon at 11:19 AM2comments:
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Business တစ်ခုဆိုတာဘာလဲ? သူ့ရဲ့ အဓိကအလုပ်ကဘာလဲ... အဲဒီလိုမေးရင်တော့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးအဖြေတွေ တူကြမယ်မထင်ဘူး။ To make profit အမြတ်အစွန်းရရှိဖို့လို့ ဖြေတဲ့သူများမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလိုဖြေခဲ့တာ။ ဆရာကြီး ပီတာဒရပ်ကာ ကတော့ အတိုဆုံး ဒီလိုပြောထားပါတယ် ... Customer တွေရရှိပြီး အဲဒီ Customer တွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့တဲ့။ (Businesses exist to create Customer)
ဆိုတော့ ကိုယ့် Organization ကလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ အဲဒီအချက်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝုိုက်သော နည်းနဲ့ဖြစ်စေ ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာ တော်တော်အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်က လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုပြီး ငွေတွေ လူအင်အားတွေကို သုံးတော့သုံးပါရဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီလို သုံးတာဟာ Customer အသစ်ရရှိဖို့ရော ရှိပြီးသား Customer တွေကို စိတ်ကျေနပ်စေပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား နိုင်ဖို့ရောမှာ ဘာမှ အကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်တတ်လို့။
တလောက ညီလေးတစ်ယောက် သူ့သင်တန်းအသစ်တွေအတွက် ရုံးခန်းအသစ်လေးဖွင့်လို့ဆိုပြီး ဖိတ်တာနဲ့ ရောက်ခဲ့တယ်။ ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ ရှယ်ပဲ။ ခင်းထားတာတွေက ဘယ်လ်ဂျီယံကော်ဇောတွေ။ ဒါတွေတွေ့တော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ Peter Drucker ရဲ့ သီအိုရီကို သတိရမိတယ်။ သူ့အလုပ်က စာသင်တာ။ Customer တွေက ကျောင်းသားတွေ။ ကျောင်းလာတက်ချိန်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကော်ဇောပေါ် နင်းလျှောက် သွားရလို့ အကျိုးသိပ်မများလှတာသေချာတယ်။ အဲဒီအစား Water Cooler လေးတစ်လုံးချပေးထားတာ၊ AirCon ဖွင့်ပေးထားတာမျိုးကမှ Customer က တစ်ခုခုရသွားဦးမယ်။
နောက်တစ်ခု.... Mobile Phone တွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ခု။ အထဲမှာ ပြင်ထားတာကတော့ အပျံစားပဲ။ မီးဆလိုက်တွေဘာတွေရောပါသေး။ ဒါပေမဲ့ Customer (ကိုယ့်အနေနဲ့) တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အဓိကကျတဲ့ ဖုန်းတွေကို ကြည့်ရတာ ပြင်ဆင်ထားပုံ သိပ်မကြိုက်လှဘူး။ အခုပြင်ထားတဲ့ အဆင်အပြင်ရဲ့ တ၀က်လောက်နဲ့ ဖုန်းတွေကို အဆင်ပြေပြေကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားရင် ၀ယ်သူအတွက်အများကြီးပိုအကျိုးရှိမှာ ....
သူများကိုသာလျှောက်ပြောနေတာပါ။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့အစည်းမှာလဲ အဲဒီလို အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို တိုက်ရိုက်ရော သွယ်ဝိုက်ပြီးရော ဘယ်လိုမှ အကျိုးမပြုပဲ အဟောသိကံဖြစ်နေတဲ့ Expense တွေ လုပ်အားတွေ အများကြီးပဲ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့် MDနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စကားစမြည်ပြောရင်း ဒီအကြောင်းလေးကို ပြောဖြစ်လို့ ပြန်ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ ရေးချလိုက်တာပါ။
Posted by little moon at 10:11 AM2comments:
Posted by little moon at 2:13 PM 8 comments:
At airport security (in America)
fom forward email ....
Posted by little moon at 5:39 PM2comments:
FA စတုတ္ထအဆင့် Cardiff အသင်းနဲ့ ပြန်ကန်ရတဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာက ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ Arsenal အသင်းက Croatia တိုက်စစ်မှူး Eduardo တစ်ယောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အသင်းကြီးနဲ့ ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာပဲ ပင်နာတီတစ်ဂိုးအပါဝင် နှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇-၀၈ ဘောလုံးရာသီအစမှာ မထင်မရှားကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာရတာပါ။ Premier League က တစ်ခြားအသင်းကြီးတွေ နံမည်ကြီးကစားသမားတွေ ခေါ်ခဲ့ချိန်မှာ မန်နေဂျာကြီး ၀င်းဂါးက သူ့ကို Arsenal ကို ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေ သွင်းနေရင်းက ဘာမင်ဂမ်နောက်ခံလူ မာတင်တေလာရဲ့ ကြမ်းတန်းစွာဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ဘယ်ဖက်ခြေတောက် သွင်သွင်ကြိုးပြီး တစ်နှစ်လောက်အနားယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူးရှားပါးနေရတဲ့ကြားထဲမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေထပ်ဖြစ်လို့ အခက်တွေ့နေရတဲ့ Arsenal အသင်းအတွက်တော့ Eduardo ပြန်ကစားနိုင်လာတာ တကယ့်ကို အင်အားတစ်ခုပါပဲ ...
Posted by little moon at 1:11 PM 1 comment:
(green leafy vegetable). Andapork chop can give you 100% of your recommended daily allowance of vegetable products.
'Life should NOT beajourney to the grave with the intention of arriving safely in an attractive and well preserved body, but rather to skid in sideways - Chardonnay in one hand - chocolate in the other - body thoroughly used up, totally worn out and screaming 'WOO HOO,
Posted by little moon at 5:18 PM 13 comments:
Posted by little moon at 11:23 AM6comments:
Posted by little moon at 2:55 PM5comments:
မနက်ရနာရီကျော်လောက်နိုးလာတယ်။ ယောက်ခမက သားကို ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး သွားတိုက်ဖို့ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ သားတော်မောင်ကို ချီပြီး အိမ်အောက်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဆေးတိုက်ရမဲ့နေရာက အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးဘူးရယ်။ ရနာရီလာခဲ့ပါလို့ စာရွက်ထဲရေးထားပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ပြင်ဆင်တုန်းမို့ ခဏစောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ ဆေးတိုက်ပြီးတော့ ရေတာရှည်လမ်းအတိုင်း ဗဟန်းဈေးဖက်ကို လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ သားတော်မောင် ကတော့ လမ်းထွက်ရရင် ဟိုဖက်လှည့်ကြည့်လိုက် ဒီဖက်လှည့်ကြည့်လိုက်နဲ့ ပျော်လို့ပေါ့။ ဈေးနားမှာ ဂျာနယ်လေးဝယ်ပြီးတော့ အိမ်ပေါ်ပြန်တက်ခဲ့တယ်။
အီကြာကွေးနဲ့ ပဲပြုတ်စား ကော်ဖီသောက်ရင်းနဲ့ ဂျာနယ်လေးခဏဖတ်တယ်။ ၉နာရီထိုးခါနီးလောက်မှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ အိမ်ကထွက်တယ်။ သားကိုတော့ ယောက်ခမကြီးက သူ့သူငယ်ချင်းအိမ် မွေးနေ့သွားတာ ခေါ်သွားမယ်တဲ့။ ညကတည်းက ထုတ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဖွဲ့ထုတ်ကို ကိုင်ရင်း လမ်းထိပ်က စီးနေကြ taxi နဲ့ ထွက်ခဲ့တယ် ဒဂုံမြို့သစ် ဘေလီတံတားအဆင်းတဲ့။ သူတို့မင်္ဂလာဆောင်သွားလို့ ဒီတံတားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြတ်ဖူးတာပဲ။ တစ်ခါမှ ဒီဖက်လမ်းကနေ ဒဂုံမြို့သစ်ကို မသွားဖူးသေးဘူးလေ။ သီတဂူကျောင်းဆိုပြီး ဘေလီတံတား အဆင်းမှာပဲ လွယ်လွယ်ကူကူတွေ့တယ်။ တော်သေးတယ် မရှာရလို့။ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီလို အလှူတွေ မင်္ဂလာဆောင်တွေ ဖိတ်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှာရတာနဲ့ ရွာလည်နေတတ်လို့။
ကယ်လဗျင်ကြီးနဲ့ ဒေါ်နှင်းဆီတို့ မင်္ဂလာမောင်နှံက ထိပ်ဝကတယ် ကြိုနေကြတယ်။ စောသေးတော့ ဧည့်သည်တွေသိပ်မရောက်ကြသေးဘူး။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လူတွေစုံလာတယ်။ NativeMyanmar Forum ကလူတွေ တော်တော်လေးလာကြတယ်။ စားကြသောက်ကြ ပြောကြဆိုကြ ရီမောကြနဲ့ ပျော်စရာကြီးပေါ့။
အဲဒီကပြန်တော့ နေ့လည် ၁၂ခွဲလောက်ရှိပြီ။ ဘိုးသိန်း ဒေါ်ဂျီပါတို့နဲ့ ကားကြုံလိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဘိုးသိန်းက ယုဇနပလာဇာသွားပြီး DVD ၀ယ်ဦးမှာမို့ ဘိုးသိန်းတို့အိမ်ကို ခဏ၀င်တယ်။ အဲဒီမှာ မJeeper က သူ့အဖေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ကိုယ့်အဖေနဲ့ သူ့အဖေက တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ။ မာကြောင်း သာကြေားတွေပြောရင်း အန်ကယ်နဲ့ အန်တီစိုက်ထားတဲ့ ဘွန်ဆိုင်းပင်လေးတွေကို လိုက်ကြည့်ရင်း ကိုယ်လည်း ဒါမျိုးဝါသနာပါတာသိသွားလို့ ခံပင်လေး တစ်ပင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်။
DVD ၀ယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ယောက်ခမနဲ့ သားလေးတို့က ပြန်မရောက်သေးဘူး။ ညနေဖက် နေအေးမှ ပြန်လာကြမယ်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ DVD လေးဖွင့်ပြီး သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Series ကို ဟိုရစ် ဒီကျော်နဲ့ ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ စာတန်းတော့ မထိုးဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်လမ်းက သိပြီးသားဆိုတော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ ခွေလေးကြည့်ရင်း လက်ကျန် Tiger beer လေး နှစ်ပုလင်းကို သောက်ဖြစ်တယ်။
၅နာရီကျော်လောက်မှာ ယောက်ခမကြီးနဲ့သားလေးတို့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ကိုယ်လဲ ရေမိုးချိုးပြီး နောက်တစ်ပွဲ နွဲဖို့ ပြင်ဆင်ရတယ်လေ။ ကယ်လဗျင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို သွားရဦးမှာလေ။ အိမ်နဲ့ မနီးမဝေး ကန်တော်မင်ထဲက ဆိုင်ဆိုတော့ လမ်းလျှောက်ပဲသွားလိုက်တယ်။ NativeMyanmar ကလူတွေကြီးပဲ စားပွဲဝိုင်းဆက်ပြီး ထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ ညစာစားပွဲပြီးတော့ မင်္ဂလာစုံတွဲကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်ပြန်လွှတ်လို့ဖြစ်မလဲ။ ကာရာအိုကေလိုက်ပို့ခိုင်းတာပေါ့။ သူတို့မှာလည်း မနက်ကတည်းက အခုထိ နားရပုံမပေါ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားအရ ညှင်းဆဲရတာပေါ့။
ကာရာအိုကေကပြန်တော့ တစ်နာရီလောက်ရှိပြီထင်တယ်။ မင်္ဂလာစုံတွဲကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ရယ် ဘကြီးဇော်မိုးရယ်၊ ကိုနဗန၊ ညီလင်းဆက်၊ Rain တို့ ပွဲဆက်ရအောင်ဆိုပြီး လမ်းမတော်ထိပ်က မယုထမင်းကြော်ဆိုင်မှာ ဘီယာဆက်သောက်ဖြစ်ကြတယ်။ ပြောကြဆိုကြနဲ့ မနက်သုံးနာရီကျော်မှ ဆိုင်ကထဖြစ်ကြတယ်။ ကိုနဗနကပဲ အားလုံးကို လိုက်ပို့ပေးတယ်။
အခုမနက် အိပ်ယာထတော့ ခေါင်းတွေကကိုက်ခဲပြီး တ၀ါးဝါးသမ်းရင်းနဲ့ပဲ အားတင်းပြီး ရုံးကို ထွက်ခဲ့ရတယ်။ :D
Posted by little moon at 11:39 AM7comments:
ရုရှားကလပ် Zenit က Arshavin တစ်ယောက် နောက်ဆုံးတော့ Arsenal ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဇန်န၀ါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်းမှာ Zenit ကလည်း ဈေးမလျှော့ပေးချင်၊ Arsenal ကလည်း ဈေးတိုး မပေးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က အပြောင်းအရွှေ့ပျက်ပြီတောင် ထင်ခဲ့တာ။
ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ အခက်တွေ့နေတဲ့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ အခု Arshavin ရောက်ရှိလာတာဟာ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ Fabregus ဒဏ်ရာကြောင့်မကစားနိုင်ချိန်မှာ ကွင်းလယ်ကနေ အသင်းကို မောင်းနှင် ကစားမဲ့၊ ဘောလုံးဖြန့်ဝေပေးမဲ့ ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်တစ်ယောက် အရမ်းကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ Denilson, Diaby နဲ့ Saung တို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားအားက အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင် သို့မဟုတ် ပိတ်ကစားတတ်တဲ့ ခပ်မာမာကစားတတ်တဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် တိုက်စစ်ကို မပံ့ပိုးနိုင် မထိုးမဖောက်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းကောင်းအနေနဲ့ မကြာခင်မှာ ခရိုအေးရှားတိုက်စစ်မှူး Eduardo ပြန်ပြီးကစားနိုင်တော့မှာပါ။ တောင်ပံ တိုက်စစ်မှူး Walcott ကလည်း မကြာခင်မှာ ပြန်ကောင်းလာတော့မှာပါ။ Arshavin အနေနဲ့ Zenit အသင်းနဲ့ Champions League မှာ ကစားခဲ့လို့ Arsenal ကို ကိုယ်စားပြုပြီး မကစားပေးနိုင်ပေမဲ့ Premier League ပွဲတွေမှာတော့ Arsenal ကို အထောက်အကူအများကြီးပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Arshavin ရောက်လာတဲ့အတွက် အခု ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေတဲ့ လူငယ်ကစားသမားအချို့ အရန်ကစားသမားဘ၀ကို ပြန်ရောက်ရမှာပါ။
Arshavin ရောက်လာလို့ သူနဲ့အံဝင်မဲ့ Team Formation ကိုလည်း မန်နေဂျာကြီး Winger က ဘယ်လို ပုံဖော်ကစားမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Posted by little moon at 9:36 AM No comments:
Posted by little moon at 4:59 PM7comments: